अब समलिङ्गीलाई ढुङ्गाले हानेर मारिने
नयाँ इस्लामिक कानुन
ब्रुनाईको समलिङ्गी समुदायले आफूहरूले मध्ययुगिन सजाय पाउनसक्ने डर व्यक्त गरेका छन्। नयाँ कानुन अनुसार कुनैपनि व्यक्तिलाई समलिङ्गी व्यवहार गरेको चारजनाले देखेका वा आफैंले स्वीकार गरे मात्रै सजाय दिन सकिन्छ।
ब्रुनाईका शासक परिवारसँग ठूलो सम्पत्ति छ र ब्रुनाईका नागरिकहरूले राज्यबाट कर तिर्नु नपर्ने राम्रो सुविधा प्राप्त गर्छन्। ब्रुनाईमा कुल ४२०,००० दुई तिहाइ जनसङ्ख्या इस्लाम धर्मालम्बीको छ। ब्रुनाईको कानुनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था भएपनि सन् १९५७ यता कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिइएको छैन।
ब्रुनाईले सन् २०१४ मा सरिया कानुन लागु गरेको थियो र सुल्तानले केही वर्षमा नयाँ मुलुकी संहिता लागु हुने बताएका थिए। गएको शनिवार सरकारले वेबसाइटमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बुधवारदेखि सरिया मुलुकी संहिता लागु हुने घोषणा गरेको हो।
“ब्रुनाईको मुलुकी संहिता मानव अधिकार हनन् गर्ने व्यवस्था भएको समस्याग्रस्त कानुन हो।” संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि मुलुकी संहितालाई ‘क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक’ भएको र मानव अधिकार संरक्षणमा बाधा पार्ने बताएको छ।
के के सजाय छन् ?
बलात्कार, व्यभिचार, लुटपाट र मोहम्मदको अपमान गर्नेका लागि मृत्युदण्डको व्यवस्था नयाँ कानुनमा छ। गर्भपात गरेमा सार्वजनिक रूपमा कोर्रा हान्ने र चोरीका लागि हातखुट्टा काट्ने व्यवस्था छ।
साथै १८ वर्षभन्दा मुनिका किशोरकिशोरीलाई इस्लामभन्दा अरू धर्मका बारेमा सिकाउनु पनि गैरकानुनी बनाइएको छ। कानुन मुलत इस्लाम धर्मालम्बीमा लागु हुने भए पनि यसका केही व्यवस्थाहरू सबैमाथि लागु हुन्छ। बीबीसी
homosexuals are stoned and killed
PREVIOUS POST Previous post: के हो मेनिया र कसरी बच्‍ने ?
NEXT POST Next post: ‘अदालतको कठघरामा शब्द हारेपछि…’